बाँके : किन बढ्दै छ अभद्र व्यवहारका मुद्दा ! - Kohalpur Trends
बाँके : किन बढ्दै छ अभद्र व्यवहारका मुद्दा !
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएपछि बाँकेमा अभद्र व्यवहारका मुद्दा ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । तर, प्रहरीले अभद्र व्यवहार नभएका घटनामा पनि अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउने गरेको पाइन्छ । अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नका लागि पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउने गरेको पछिल्ला धेरै उदाहरण पाइन्छ ।
बाँके प्रहरीले गत बर्ष अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्नेलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन कतिपय मुद्दामा अनुसन्धानका लागि सुरुमा प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउने गरेको छ । यसैबर्ष मंसिरमा हिरासतमा मृत्यु भएका बाँके बनकट्टीका बाबुलाल रैदास माथि पनि प्रहरीले अभद्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीमाथि बालकमाथि कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा अनुसन्धान भैरहेको थियो । परिवारले रैदासले अपराध स्वीकार नगरेकाले प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दा थपेको परिवारले आरोप लगाएका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।’ मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१)मा उल्लेख गरिएको ‘अभद्र व्यवहार’सम्बन्धी कानुन प्रहरी र पहुँचवालाले प्रतिशोध साँधी सर्वसाधारण जो कोहीलाई फसाउन सकिने सजिलो ‘फर्मूला’ बनेको छ । सामान्य भनाभन, झैझगडा, रुखो व्यवहार, आमने–सामने हुने कुराकानीलाई पनि ‘अभद्र व्यवहार’ को सजाय माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिनेको संख्या बढ्दो छ ।
नयाँ कानुनसँगै अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा देशभर नै बढ्दै गएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्रहरी वा माथिल्लो निकायका व्यक्तिले अभद्र व्यवहार सम्बन्धि कानुनको दुरुपयोग गर्ने गरेको उनीहरुको बुझाई छ । कसैसँग पूर्वाग्रह राखेर कानुनको दुरुपयोगको सम्भावना बढेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
प्रहरी अधिकारीहरु नै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जाहेरी तथा उजुरी परेको तथा कानुनी कारवाहीका लागि प्रमाण जुटिनसकेको अवस्थामा थप अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न उक्त कानुनको प्रयोग गरिएको स्वीकार्छन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएपछि सरकारवादी हुने मुद्दाको सूचीमा हेरफेर गर्नुका साथै सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, अभियोजन प्रक्रिया तथा मुद्दाको कारवाही र सजाय निर्धारण लगायतका विषयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेका छन् । त्यस्तै सरकार वादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुझ र दायरीका सम्वन्धमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले फरक व्यवस्था गरेका छन् ।
घट्यो सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर
बाँकेमा अभद्र व्यवहारका मुद्दा ह्वात्तै बढेको तथ्यांक देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अढाई बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अभद्र व्यवहारका मुद्दा बढ्दै गएको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार, आ.व. २०७५÷०७६ मा ७७ वटा अभद्र व्यवहारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । उक्त संख्या आ.व. २०७६÷०७७ मा बढेर २ सय ३५ पुगेको थियो । जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा तेब्बरले बढी हो ।
चालु आ.व. २०७७÷०७८ को पाँच महिनामा ९२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो संख्या गत आ.व.को सोही समयमा १ सय १६ थियो ।
बाँके प्रहरीको तथ्यांकले सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मुद्दामा भने कमी आएको देखाएको छ । आ.व. २०७५÷०७६ मा १४९ वटा सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका थिए । उक्त संख्या आ.व. २०७६÷०७७ मा कमी आइ ५९ मा सीमित थियो । चालु आ.व.को पाँच महिनामा एउटा मात्रै सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मुद्दा दर्ता भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा ५४ वटा थियो ।
The put up बाँके : किन बढ्दै छ अभद्र व्यवहारका मुद्दा ! appeared first on Nepalgunj News.
Previous Previous post: बर्दियामा खरखडाइ खुला, भालुको आक्रमण
Next Next post: उपभोक्ताको हित संरक्षणमा मञ्चले सक्रियता बढाउने